Maxaa ugu Wacan in Xildhibaanadu Caloosha ka Weynaadaan Lugahana u Yaryaraadaan .Qore- Eng Biid | Voice Of Somalia
Maxaa ugu Wacan in Xildhibaanadu Caloosha ka Weynaadaan Lugahana u Yaryaraadaan .Qore- Eng Biid
Posted on June 4, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Waxaan ahay Injineer dhanka dhismaha, siyaasaddana aan u daymo la’ayn waxna ka qora mararka qaar.
Su’aasha aan cinwaanka uga dhigay maqaalka waxaa laga yaabaa in dadka ay siyaabo kala duwan uga jawaabaan oo ay fududeystaan, laakin xaqiiqdii aniga ma fududeysan markii ugu horeysay ee la i weydiiayay.
Asxaab baan ahayn wada jooga dalka dibaddiisa, xilli habeen ah baa waxaa Talafeeshanka soo galay xildhibaanada baarlamaanka Jawaari, oo ka doodayay mooshinkii Saacid, markii uu kulanka dhamaaday ayaa waxaan haddana aragnay xildhibaanada oo koox koox albaabka uga baxaya.
Anigu kuma baraarugsaneyn habdhismeedka jirkooda iyo labiskooda toona, balse asxaab ila joogtay ayaa mar qura igu yiri eeg xildhibaanada muuqaalkooda caloosha wey u weyn yihiin, lugahana wey u yar yar yihiin ee maxaa u sabab ah?
Runtii su’aashaasi wey igu adkaatay waayo muddo waan arkayay in xildhibaanadu noocaas yihiin, haddana isma weydiin jiray sababta sidaa awgeed waxaan asxaabtii ka codsaday bal iney i siiyaan fursad aan uga jawaabo.
Maalmo kadib anigoon wali helin jawaab sax ah oo cilmiyeysan sidoo kalana xaqiiq ah ayaa waxaa isoo galay safar Muqdisho ah waxaana ku tala galay inaan jawaabta ka keeno caasimadda maadaama ay tahay halka ay dhooban yihiin xildhibaanada.
Markii aan Muqdisho ka dagay oo danahaygii dhameystay ayaa waxaa ii suura gashay inaan arko xildhibaano tabtii u sameysan, ma ahayn dad aan aqaano oo aan la sheekeysan karo, balse waxaa ugu dambeyntii ii suura gashay inaan la kulmo dhaqtar xildhibaanada ka tirsan.
Sheeko dheer kadib waxaan ku iri’ maadaama aad dhaqtar tahay, jawaab ma iga siin kartaa arin I wareerisay oo ah waxa sababay in xildhibaanada qaarka sare u kuusnaadaan, qaarka hoosana u tifoobaan?
Dhaqtarkii intuu qosol la dhacay ayuu igu yiri’ “War ninyohow waa gartaa dibadda ayaad ka timid waxna lama socotid!”
Wuxuu ii sheegay in arimo ammaan dartood ay xildhibaanadu sidaa la noqdeen, sababtana wuxuu ka dhigay, iyagoo aanan lugeyn karin xitaa boqol tallaabo cabsi ay Shabaab ka qabaan darteed iyo iyagoo caado ka dhigtay iney hoteelada ku xareysnaadaan ama gaadiid ku socdaan.
Intooda badan waa da’a ahaan weyn,qurbahana ka yimid,waxayna la daala dhacayaan cuduro kala duwan,Sonkorta ama Macaanka,Dhiig Kar iyo Cholestorol-ka oo fara xun ku haya,waxayna qaataan daawooyin looga keeno dhulki ka yimaadeen.
Xildhibaano ma ahan dad xariir la leh dadka kale,ma ahan dad la socda waxa ku wareegsan ma ka jira magaalada.
Taas waxaa ka dhashay buu yiri’ in xildhibaanadu caloosha weynaato, luguhuna yar yaraadaan maadaama ay wax cunayaan kadibna iska jiifanayaan.
Runtii halkan waxaa iiga soo baxay nolosha adag ee ay xildhibaanadu ku nool yihiin iyo sida ay u halligeen noloshooda.
Qore- Eng Biid.
Doorasho ku sheegyadii Suuriya oo bilowday!
DHAGEYSO:- Dowladda oo ku Dhawaaqday iney Eeyo u adeegsaneyso Amaanka Muqdisho.